Umsebenzi Nokungena (3) | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Empeleni, uNkulunkulu akadingi okuningi kumuntu, kodwa ngenxa yokuthi igebe eliphakathi kwezinga labantu kanye nesilinganiso uNkulunkulu asidingayo likhulu kakhulu, abantu abaningi bamane babheke lapho kuvela khona izindinganiso zikaNkulunkulu kodwa bantule ikhono lokuzifeza. Isiphiwo semvelo yabantu, kanye nalokho abanakho ngemva kokuzalwa, kukude kakhulu nokwanela ukuhlangabezana nezindinganiso zikaNkulunkulu. Kodwa ukumane ubone leli phuzu akusona isixazululo esiqinisekile. Amanzi akude ngeke aqede ukoma okumanje. Ngisho noma abantu bezazi ukuthi baphansi kunothuli, uma bengenakho ukuzimisela ukwanelisa inhliziyo kaNkulunkulu, kuba kuncane kakhulu ukuthatha indlela eya phambili ekuhlangabezaneni nezimfuneko zikaNkulunkulu, khona-ke kusiza ngani ukuba nalolo hlobo lolwazi? Akufani yini nokukha amanzi ngesisefo—okuwumzamo oyize? Umnyombo walokhu engikushoyo umayelana nokungena; yileyo ingqikithi yendaba.
Ngesikhathi sokungena komuntu, ukuphila njalo kuba nesidina, kugcwala izinto zokuphila okungokomoya okunesidina, njengokwenza umthandazo, ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, noma ukuhlangana ndawonye, ukuze abantu njalo bezwe ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu akuyilethi injabulo enkulu. Imisebenzi engokomoya enjalo njalo yenziwa ngokwesisekelo sesimo semvelo yobuntu, eyonakaliswe uSathane. Nakuba abantu ngezinye izikhathi bethola ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele, ukucabanga kwabo kwemvelo, isimo, indlela yokuphila kanye nemikhuba kuselokhu kugxile ngaphakathi kwabo, ngakho imvelo yabo ihlala ingaguqukile. Izenzo zezinkolelo abantu abazenzayo ziyilokhu uNkulunkulu akuzonda kakhulu, kodwa abantu abaningi abakakwazi ukuzidedela, becabanga ukuthi lezi zinkolelo ziyimiyalo kaNkulunkulu, futhi nanamuhla abakazilahli ngokuphelele. Izinto ezinjalo ezifana namadili omshado noma izimpahla zomakoti; izipho zemali, nenala yokudla, kanye nezindlela ezifanayo okugujwa ngazo izehlakalo zenjabulo; izindlela ezaqala endulo; nayo yonke imicimbi yezinkolelo ezingenamqondo eyenzelwa abangasekho kanye nemicimbi yomngcwabo: konke lokhu uNkulunkulu uyakuzonda kakhulu. Ngisho usuku lokukhonza (okufaka iSabatha, njengoba ligcinwa umhlaba wamakholwa) uyalizonda; futhi ubudlelwane babantu nokuxhumana kwasemhlabeni phakathi komuntu nomuntu konke uNkulunkulu uyakuzonda futhi uyakuchitha. Ngisho noMkhosi Wasentwasahlobo noSuku LukaKhisimusi, okwaziwa yiwo wonke umuntu, akuwona umyalo kaNkulunkulu, ingasaphathwa eyamathoyizi nemihlobiso (izinkondlo ezimigqa mibili, ikhekhe loNyaka Omusha, amakrikhethi, izibani, izipho zikaKhisimusi, amaphathi kaKhisimusi neSidlo esiNgcwele) yalezi zikhathi zemikhosi—ingabe akuzona yini izithixo ezingqondweni zabantu? Ukuhlephula isinkwa ngeSabatha, iwayini, nelineni elicolekile kuyizithixo nakakhulu. Zonke izinsuku zemikhosi yomdabu ezidumile eChina, efana nobizwa ngokuthi Usuku Lokuphakamisa Amakhanda kaDrako, iDragon Boat Festival, uMkhosi Waphakathi Nekwindla, uMkhosi weLaba kanye Nosuku LukaNcibijane, kanye nemikhosi yenkolo efana nePhasika, uSuku Lokubhapathizwa, noSuku LukaKhisimusi, yonke le mikhosi engenasizathu yahlelwa futhi yehliswa kusukela endulo kuze kube manje ngabantu abaningi, futhi ayihambelani nhlobo nesintu esidalwe uNkulunkulu. Ukuzakhela izithombe-mqondo kwesintu nemibono yaso enobuchule okwenze yehla yaze yafika namuhla. Ibonakala ingenazici, kodwa empeleni ingamaqhinga kaSathane awenza esintwini. Lapho indawo igcwala oSathane abaningi, futhi lapho indawo isiphelelwe yisikhathi futhi isele emuva, iwagcina ngokujulile amasiko esidala. Lezi zinto zibabamba zibaqinise abantu, azivuli ngisho nesikhala esincane sokunyakaza. Imikhosi eminingi emhlabeni wenkolo ibonakala iveza ikhono lokuqamba elikhulu nokwakha ibhuloho eliya emsebenzini kaNkulunkulu, kodwa empeleni ziyizibopho ezingabonakali uSathane abopha ngazo abantu ukuba bangafinyeleli ekwazini uNkulunkulu—yonke ingamaqhinga obuqili bukaSathane. Eqinisweni, lapho isigaba somsebenzi kaNkulunkulu sesiphelile, usuke esewephulile amathuluzi nendlela yangaleso sikhathi akashiya mkhondo wakho. Nokho, “amakholwa azinikele” ayaqhubeka nokukhonza lezo zinto eziphathekayo; ngaleso sikhathi lokho uNkulunkulu anakho bakubeka emuva emiqondweni yabo, bangaqhubeki nokukucubungula, babonakala begcwele uthando lukaNkulunkulu, kanti empeleni bamxosha kudala endlini babeka uSathane etafuleni ukuze bamkhonze. Imidwebo kaJesu, yeSiphambano, kaMariya, yokuBhabhathizwa kukaJesu neyeSidlo Sokugcina - abantu bakwesaba njengeNkosi yeZulu belokhu bememeza ngokuphindaphinda bethi “Nkulunkulu uBaba.” Ingabe konke lokhu akulona ihlaya? Kuze kube namuhla, izisho nezenzo eziningi ezifanayo ezazidluliswa phakathi kwesintu ziyazondwa uNkulunkulu; ziyiphazamisa kakhulu indlela eya phambili kaNkulunkulu futhi, kwakha ukulahlekelwa okukhulu ekungeneni kwesintu. Uma kubekwa eceleni izinga uSathane onakalise ngalo isintu, ingaphakathi labantu ligcwaliswe ngokuphelele ngezinto ezinjengomthetho kaWitness Lee, izigameko zikaLawrence, inhlolovo kaWatchman Nee nomsebenzi kaPawulu. Ayikho indlela uNkulunkulu angasebenza ngayo kubantu ngoba ngaphakathi kugcwele ububona, imithetho, imitheshwana imiyalo izinhlelo, kanye nezinto ezinjalo; lezi zinto, ngaphezu kwezinjwayezi zezinkolelo zesidala zibathumbile futhi zasishwabadela isintu. Kufana nokuthi imicabango yabantu iyifilimu exoxa inganekwane ngombala ogcwele, nabantu abamangazayo abagibele amafu, eyakhiwe kahle kakhulu ngengqondo ukuze imangalise abantu, ishiya abantu bemangele futhi bevaleke imilomo. Ukukhuluma iqiniso, umsebenzi uNkulunkulu oza ukuzowenza namuhla ikakhulu ukuba azobhekana futhi axoshe izingxenye zabantu ezinezinkolelo-ze kanye nokuguqula ngokuphelele isimo sabo sengqondo. Umsebenzi kaNkulunkulu awusikho lokho okwehliselwe ezizukulwaneni futhi kwagcinwa kwaze kwaba namuhla yisintu; kungumsebenzi owaqaliswa nguye athupha futhi waphethwa nguye, ngaphandle kwanoma yisiphi isidingo sokulandelela ifa elithile lomuntu ongokomoya omkhulu, noma ukwamukela noma yimuphi umsebenzi wohlobo lokumela owenziwa uNkulunkulu kwenye inkathi ethile. Abantu akufanele bazikhathaze nganoma iyiphi kulezi zinto. UNkulunkulu namuhla unenye indlela yokukhuluma kanye nokusebenza, ngakho kungani abantu kufanele bazikhathaze? Uma abantu behamba indlela yanamuhla ephakathi komgudu wamanje ngesikhathi beqhubeka nefa “lokhokho” babo, ngeke bafinyelele lapho beya khona. UNkulunkulu uzizwa enokunengwa okujulile ngale ndlela yokuziphatha komuntu, njengoba-nje ezonda iminyaka, izinyanga nezinsuku zomhlaba wesintu.
Indlela engcono kakhulu yokuguqula isimo somuntu ukuphendukezela lezo ngxenye zezinhliziyo ezingaphakathi kakhulu kubantu esezifakwe ubuthi kakhulu, kuvunyelwe abantu ukuba baqale ukuguqula izinkolelo zabo nokuziphatha kwabo. Okokuqala, abantu kudingeka babone ngokucacile ukuthi wonke amasiko enkolo, imisebenzi yenkolo, izinsuku, imikhosi, konke uNkulunkulu uyakuzonda. Kufanele bagqashule kulezi zibopho eziwukucabanga ngendlela endala, baqede yonke inhlese ezinzile yokukhonza kwabo izinkolelo. Konke lokhu kuyingxenye yokungena komuntu. Kufanele niqonde ukuthi kungani uNkulunkulu ehola abantu ebasusa ezweni, nokuthi kungani ebahola ebasusa emithethweni. Leli isango eniyongena kulo, nakuba lingahlanganise lutho nesimo senu esingokomoya, lezi izinto eziyimigoqo emikhulu evimbe indlela yenu, zinivimbele ukuthi nazi uNkulunkulu. Zakha inetha elibamba abantu. Abantu abaningi balifunda kakhulu iBhayibheli futhi bakwazi ukusho ngekhanda amavesi amaningi eBhayibheli. Ekungeneni kwabo namuhla, abantu ngokunganaki basebenzisa iBhayibheli ukuze balinganise umsebenzi kaNkulunkulu njengokungathi isisekelo somsebenzi kaNkulunkulu yiBhayibheli nomthombo wawo yiBhayibheli. Lapho umsebenzi kaNkulunkulu uvumelana neBhayibheli, abantu baweseka kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu bambheka ngelinye iso; lapho umsebenzi kaNkulunkulu ungavumelani neBhayibheli, abantu bakhathazeka kuze kuconse umjuluko befuna kulo isisekelo somsebenzi kaNkulunkulu; uma umsebenzi kaNkulunkulu kungakhulunywa ngawo eBhayibhelini, abantu bayomziba uNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi, ngokomsebenzi kaNkulunkulu namuhla, abantu abaningi bamemukela ngokucophelela okunokunwabuluka uNkulunkulu, balilalela ngokukhetha, fuhti abazikhathazi ngokulazi; ngokwezinto zakudala, babambelela engxenyeni eyodwa bayilahle enye. Ingabe lokhu kungabizwa ngokuthi ukungena? Ngokuthatha izincwadi zabanye njengamagugu, ukuziphatha njengesihluthulelo segolide sokuvula amasango ombuso, abantu abanandaba nezinto uNkulunkulu azifunayo namuhla. Ngaphezu kwalokho, “ochwepheshe abahlakaniphile” abaningi babamba amazwi kaNkulunkulu esandleni sesokunxele “nomsebenzi wobungcweti” kwesokudla, ngokungathi bafuna ukuthola isisekelo samazwi kaNkulunkulu kule misebenzi yobungcweti ukuze babonise ngokugcwele ukuthi amazwi kaNkulunkulu aqinisile, futhi baze bachazele abanye ngemisebenzi kaNkulunkulu ngokuwahlanganisa nemisebenzi yobungcweti, sengathi bayasebenza. Ukukhuluma iqiniso, baningi “abacwaningi abangososayensi” phakathi kwesintu abangakaze bayithokozele impumelelo yakamuva yesayensi engakaze yandulelwe yilutho (okusho ukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu, amazwi kaNkulunkulu nomzila oya ekungeneni ekuphileni), ngakho bonke abantu “bazethemba bona,” “bashumayela” kuzo zonke izindawo ngamandla obugagu babo, bamemezele “igama elihle likaNkulunkulu.” Nokho, ukungena kwabo kusengozini futhi babonakala bekude nalokho okufunwa uNkulunkulu njengoba isikhathi sokudala siqhelelene nalo mzuzu.. Kulula kangakanani ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu? Kubonakala sengathi abantu sebenqumile kakade ukushiya isigamu sabo kokwayizolo balethe esinye namuhla, banike uSathane isigamu bese esinye besinika uNkulunkulu, ngokungathi lena indlela yokukhulula unembeza bezwe umuzwa othile wokunethezeka. Imihlaba yangaphakathi kubantu igcwele ubuqili, abesabi nje kuphela ukulahlekelwa yikusasa, kodwa nezolo, besaba kakhulu ukucasula uSathane noNkulunkulu wanamuhla, obonakala enguye kodwa futhi engewuye. Ngenxa yokuthi abantu sebehlulekile ukukhulisa ukucabanga nesimilo sabo ngokufanele, bayantula kakhulu ekuqondeni, futhi abakwazi ukusho ukuthi umsebenzi wanamuhla okaNkulunkulu yini noma cha. Mhlawumbe kungenxa yokuthi imicabango yabantu yesidala neyezinkolelo ijule kangangokuba kade babeka inkolelo neqiniso, uNkulunkulu nezithixo emkhakheni owodwa, abanandaba nokwahlukanisa phakathi kwalezi zinto, futhi babonakala bengakwazi ukwehlukanisa ngokucacile noma sebexukuza ubuchopho babo. Yingakho abantu sebemi ndawonye futhi bengasakwazi ukuya phambili. Zonke lezi zinkinga zisuka ekuntuleni kwabantu uhlobo olufanele lwemfundo yomqondonkolelo, okudala izingqinamba ezinkulu ekungeneni kwabo. Ngenxa yalokho, abantu abaze bangaba nendaba nomsebenzi kaNkulunkulu weqiniso, kodwa balokhu bephikelela begxile emsebenzini womuntu (njengalabo ababukwa njengabantu abakhulu) njengokungathi bashiselwe ngensimbi yiwo. Ingabe lezi akuzona izihloko zakamuva umuntu okumele angene kuzo?
1. “Ukunamathela okuqhubekayo” kusetshenziswa ngendlela yokubhuqa. La magama abonisa ukuthi abantu banenkani futhi abanakulungiseka, babambelele ezintweni esezaphelewa yisikhathi zakudala futhi abafuni ukuziyeka.
Okwedlule：Umsebenzi Nokungena (2)
Okulandelayo：Umsebenzi Nokungena (4)
Okokuqala, ake sihube ingoma: Ihubo Lombuso (I) Umbuso Wehlela Emhlabeni Kukhala izinsimbi: Izihlwele ziyangihalalisela, izihlwele ziyangidumisa; yonk…
Akuyona yonke into eseBhayibhelini engumbhalo wamazwi akhulunywa nguNkulunkulu mathupha. IBhayibheli lethula izigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu…